ဘေဘီလေးတွေမှာ တီဘီဖြစ်တတ်လား - Hello Sayarwon
ကလေးတစ်ယောက်ကို အကောင်းဆုံးပျိုးထောင်ပေးချင်တဲ့ စိတ်ကူး မိဘတိုင်းမှာရှိကြမှာပါ။ ဒီဆန္ဒကိုပြည့်မြောက်ဖို့က လွယ်ကူလှတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေကအများကြီးဆိုတော့ စိတ်ရှိတိုင်းဖြစ်မြောက်ဖို့က သိပ်တော့လွယ်ကူလှတဲ့ အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးလေ။ နုနယ်လွန်းတဲ့ ကလေးကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒုနဲ့ဒေးဆိုတော့ ကိုယ့် သားသားမီးမီးလေးကိုရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့ ကသိပ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။လေထဲကနေတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေဆို ပိုလို့တောင်ကာကွယ်လို့ခက်ဦးမယ်နော်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုယ်မသိလိုက်ဘဲလေထဲကနေတဆင့် ကလေးကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါအကြောင်းလေးပြောပြပေးပါရစေ။
ဘေဘီလေးကနေစလို့ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားအထိ လူတိုင်းမှာ တီဘီရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးက ငယ်သေးတာပဲ တိဘီရောဂါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မယူဆစေချင်ပါဘူး။ဘေဘီလေးတွေလည် တီဘီရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
တီဘီရောဂါဆိုတာကMycobacterium tuberculosis ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားကူးစက်ခံရတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ အဆုတ်မှာ အဓိကကူးစက်လေ့ရှိပြီး ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ နဗ်ကြောတွေ၊ကျောက်ကပ် နဲ့ ဦးနှောက်တို့မှာပါ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။လေထဲကနေတဆင့်ရောဂါပိုးကပြန့်နှံ့ကူးစက်တာပါ။
တီဘီဖြစ်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်မှာရောဂါပိုးရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ တီဘီရောဂါနဲ့ အခြားသူဆီကနေ တဆင့်ခံ ကူးစက်တဲ့ တီဘီရောဂါဆိုပြီးရှိပါတယ်။ တဆင့်ခံကူးစက်ခံရတဲ့ တီဘီရောဂါကရောဂါပိုးကောင်ရေ နည်းပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်က တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။
ဘေဘီလေးမှာ တီဘီကူးစက်ခံထားရလား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
ချောင်းက ၃ ပတ်ကျော်တဲ့အထိ မပျောက်ဘဲဆိုးနေမယ်
ချောင်းဆိုးတဲ့အခါသွေးပါတာမျိုးဖြစ်မယ်၊ စတဲ့ လက္ခဏာတွေတွေ့ရနိုင်ပါတယ်.
ဘေဘီလေးကို တီဘီကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေက
ဘေဘီလေးတွေက အရမ်းကို နုနယ်သေးတဲ့အရွယ်တွေဆိုတာ အထွေအထူးပြောနေစရာမလိုအောင် ကိုယ်ခံအားကကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးတာကြောင့်ရောဂါတွေကို ခုခံနိုင်စွမ်းနည်းလွန်းနေတဲ့ အရွယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဒီတော့ ကလေးကို အစစအရာရာသေချာလေး ဂရုစိုက်ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။
ရောဂါရှိနေတဲ့ လူကြီးနဲ့ တစ်ခန်းတည်းနေတာ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့် ကလေးကို တီဘီရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့လေနဲ့ ချွဲထဲမှာ ရောဂါပိုးပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့် ကလေးကလေးချင်းတော့ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေနည်းပါတယ်။
တီဘီရောဂါဆိုတာက မကုသဘဲ ထားရင် နှစ်နဲ့ကြာခန္ဓါကိုယ်ကို ဖိစီးနှပ်စက်တတ်တဲ့ နာတာရှည်ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ဒါကြောင့် နုနယ်တဲ့ဘေဘီလေးကိုရောဂါဆိုးအန္တရာယ်ကနေ ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ဖို့လိုပါမယ်။
အပြင်ခေါ်သွားရင် လိုအပ်တဲ့ ကာကွယ်မှုလုပ်သွားပါ
ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြမလဲ….
တီဘီရောဂါက မပါ့ဆသင့်တဲ့ရောဂါတစ်ခုပါ။ ကလေးကို တီဘီရောဂါကူးစက်ခံထား၇တယ်လို့ သံသယရှိတာနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်ူသွာပြစေချင်ပါတယ်.မြန်မြန်ကုသလေ ကလေးအတွက်ကောင်းလေပါနော်။
ကလေးကိုကြည့်ရတာ အားနည်းနေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသကြည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုကို ချက်ချင်းခံယူဖို့ပြောပါရစေ။